विवाहको केही वर्षमै सम्बन्धविच्छेद लिएपछि कस्तो महसुस हुन्छ ? | Ratopati
विवाहको केही वर्षमै सम्बन्धविच्छेद लिएपछि कस्तो महसुस हुन्छ ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeअसार १८, २०७६ chat_bubble_outline0
डाक्टर एन्ड्रयू भन्छन्, ‘आफ्नो साथीबीच सबैभन्दा पहिले यदि तपाईंको सम्बन्ध टुट्छ भने भावनात्मक तनाव हुन्छ । रिस, डर, उदासी यी सबैले तपाईंलाई बारम्बार झस्काइरहन्छन् । तर तपाईंलाई जति धेरै जीवनको अनुभव हुन्छ त्यति नै तपाईं भावनालाई सही स्थानमा प्रयोग गर्न सिक्नुहुनेछ । तर नव जवानलाई यो बुझ्न समस्या हुनसक्छ ।’